ကမ္ဘာမကျေ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကမ္ဘာမကျေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်သည်။ သီချင်း၏ အစပိုင်း(ခြေဆင်း) ကို မြန်မာ့ရိုးရာသံစဉ်ဖြင့် တီးခတ်ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အနောက်တိုင်းဂီတသံစဉ်သို့ ပြောင်းလဲ တီးခတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤသီချင်းစာသား၊ သံစဉ်များကို ဝိုင်အမ်ဘီ ဆရာတင်ခေါ် သခင်တင် ရေးစပ်သီကုံးထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၄၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၂ တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် တတိယညီလာခံ ဆဋ္ဌမမြောက် အစည်းအဝေး မှ ကမ္ဘာမကျေ ကို နိုင်ငံတော်သီချင်း အဖြစ် အတည်ပြုခဲ့သည်။ 
အမျိုးသား anthem of မြန်မာနိုင်ငံ
ဝိုင်အမ်ဘီ ဆရာတင်, ၁၉၄၇
ဝိုင်အမ်ဘီ ဆရာတင်, ၂၀ ဇူလိုင် ၁၉၃၀
၂၂ စက်တင်ဘာ ၁၉၄၇
ဤသံစဉ်မှာ သီချင်း တစ်ပုဒ်လုံး၏ သီဆိုဟန် ဖြစ်သည်
ကမ္ဘာကျေ/ကြေ (သို့) မကျေ/မကြေ ဟူသောစကားစုကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကဗျာဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာများက ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ မှတ်တမ်းများအရ အစောဆုံးတွေ့ရသော စကားစုမှာ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်၏ ကဗျာသာရတ္ထသင်္ဂဟကျမ်းတွင် ရေးသားထား၍ ဤသို့နှစ်မျိုးတွေ့ရသည်။
ပွတ်ခုံပွတ်ကျေ၊ ကျေပွန်စကား၊ စားသောက်မကျေ၊ မကျေကမ္ဘာ (ယပင့်)
အစာလည်းကြေ၊ သိသိကြေက၊ ပျက်ကြေညက်ကြေ၊ ကမ္ဘာကြေ၍ (ရရစ်)
ထို့နောက်ပိုင်း မြန်မာစာ ပညာရှင်များအဖွဲ့က ကျမ်းစာများ၊ ရေးထုံးများ၊ ရှေးဟောင်းစာပေများကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခဲ့ကြ၍ "ကျေ" နှင့် "ကြေ" အသုံးကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုရှိသောအရာတစ်ခုခု မှုန့်၊ ညက်၊ ကျိုး၊ ကွဲသွားသောအခါ၌ ရရစ်ဖြင့် ကြေ ၊ ရုပ်ဝတ္ထုမဲ့ (သို့) ဒြပ်မဲ့သော အရာများ ပျောက်ပျက်သွားလျှင် ယပင့်ဖြင့် ကျေ ဟုရေးရန်ဖြစ်သည်။
မြန်မာစာအဖွဲ့က ဆရာကြီးဦးထွန်းတင့်သည် "ကမ္ဘာမကျေ" ဟုရေးသင့်ကြောင်း အကျိုးအကြောင်းပြ၍ပြောဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သီချင်း၌ပါရှိသော ကမ္ဘာဆိုသည်မှာ မြေကြီးကမ္ဘာကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်နိုင်၊ အချိန်ကာလများ ကမ္ဘာပေါင်းများစွာကြာသော်လည်းလည်း မကျေမပျက် (မပျက်စီး) ဟုဆိုလိုဟန်တူသည်။ ထို့ကြောင့် ယပင့်ဖြင့် ရေးမှသာ သင့်တော်မည်ဟု ယူဆသည်။ ကမ္ဘာသည် အချိန်ကာလ (ဒြပ်မဲ့) သဘောကို ရည်ညွှန်းသည်ဖြစ်၍ ယပင့်ဖြင့်သာ ရေးသင့်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ကမ္ဘာမကျေသီချင်းသည် တို့ဗမာသီချင်းကို အပြောင်းလဲပြု၍ ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ကာ တို့ဗမာသီချင်းတွင် "ကမ္ဘာမကြေ" ဟူ၍ စာရေးဆရာ(များ) ကသုံးနှုန်းထားသည်။ တို့ဗမာသီချင်းစပ်ဆိုရာ၌ အဓိကရေးဖွဲ့သူမှာ သခင်တင် (ဝိုင်အမ်ဘီ) ဖြစ်ပြီး အကြံပေးသူအချို့ရှိ၍ ထိုအထဲမှ သခင်ဘသောင်း[မှတ်စု ၁]က "ယူဇနာနှစ်သိန်းလေးသောင်းအထုရှိတဲ့ ဤကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ကြေပျက်မသွားသမျှကာလပတ်လုံး ဗမာပြည်ဟာ ငါတို့ပိုင်တဲ့ပြည်ဖြစ်သည်" ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဤစကားလုံးများသည် သခင်ဘသောင်း တီထွင်ခဲ့သောဝေါဟာရမဟုတ်ဘဲ အစောဆုံးတွေ့ရှိရသည့် မှတ်တမ်းအရ ဆရာတော် ဦးဗုဓ်ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်က "ကမ္ဘာမကျေ" ဟု မူရင်း၌ သုံးစွဲထားခဲ့သည်။ လက်ရှိ၌လည်း ဤနိုင်ငံတော်သီချင်းကို "ကမ္ဘာမကျေ" ဟူသောစကားလုံးများဖြင့်သာ တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒ ဖြူစင်တဲ့ ပြည်၊
[mjá lù kʰaʔ t̪éʲɲ ɲéʲN dʑœ́n zè bo̰]
[kʰwɪ̰n tù ɲì m̥ja̰ wàda̰ pʰjù sɪ̀n dɛ̰ pjè]
[ʔədeʲʔtʰœ̀m pjṵ bè tʰéʲn̪ t̪éʲn zo̰ lè]
[tʰœ́n sʰàʊm bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀m bè ʔəpʰó tœ̀m mjè]
(tui. prany tui. mre)
htam: hcaung pa cui. le tui. ta wan pe a. hpui: tan mre //
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်သီချင်းပါ "ဗမာ"ဟူသော စကားရပ်ကို "မြန်မာ"ဟူသည့် စကားရပ်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
↑ ဘီဘီစီ (မြန်မာ)၏ ဆောင်းပါးတွင် တို့ဗမာသီချင်းကို ရေးစပ်သူသည် သခင်ဘသောင်းဟုဆိုရာ၌ အခြားကျမ်း၊ စာအုပ်များ၏ ဖော်ပြချက်နှင့် ကွဲလွဲနေသည်။
↑ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင် - ဦးသော်ဇင် (စာမျက်နှာ-၃၉)
↑ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ရက်စွဲသမိုင်း − ကျော်ငြိမ်း (၁၉၄၅ မှ ၁၉၄၈ − စာ ၇၄)
↑ ၃.၀ ၃.၁ နိုင်ငံတော်သီချင်း - ကမ္ဘာမကျေလား၊ ကမ္ဘာမကြေလား။
↑ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်၁၀/၂၀၁၀) ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်)။
↑ Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital. Article 439 (a). Page 176.
Yadanabon Archived 12 March 2009 at the Wayback Machine. - The information website about Burma featuresapage about the National Anthem, withasound file taken from the "Myanmar Radio Main Programme" Interval stored in the Interval Signals Online Archived5January 2011 at the Wayback Machine. website.
Ga Ba Majay Ba Ma Pyay (MIDI file) Archived 29 April 2016 at the Wayback Machine.
Sheet music Archived 15 December 2003 at the Wayback Machine. (from Embassy of Burma to Washington)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကမ္ဘာမကျေ&oldid=735575" မှ ရယူရန်
၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။